जोखिमपुर्ण हाइ क्लिफ हानी हन्टिंग (भिडियाे सहित) - Purbeli News
जोखिमपुर्ण हाइ क्लिफ हानी हन्टिंग (भिडियाे सहित)
प्रकाशित मिति: मंगलबार, जेठ २९, २०७५ समय: ७:४०:२३
नेपालमा सदियौ देखि चलिआएका केही यस्ता लोपोन्मुख परम्परा छन् जुन निकै आश्चर्यजनक र जोखिमपूर्ण छन् । यस्तै एउटा परम्परा हिमालको काखमा रहेको लम्जुंग जिल्लाको तांजे गाउमा प्रचलित छ जसलाई “हाइ क्लिफ हानी हन्टिंग” अर्थात् “भिर मौरीको मह सिकार” भन्ने गरिन्छ । यो परम्परा करिब २०० वर्ष अघि बाउबाजेका पालादेखि सुरु हुँदै आएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । वरिपरि घनघोर जङ्गल रहेको यस तान्जे गाउँ पुग्दा हामीले घले र गुरुङ समुदायका मानिसहरू भेट्यौ । उनीहरू वर्षमा दुइपटक नजिकैका भिरहरूमा मह काढ्न जाने गर्दा रहेछन् । तिनै मध्ये एक सिकारी कृष्ण बहादुर तामाङ् भन्छन, “मैले यो काम गर्न थालेको ४५ वर्ष पुगी सक्यो” ।
यो मह काढ्ने प्रक्रिया निकै कलात्मक पनि देखिन्छ । यसमा केही सिकारीहरू मौरी भगाउन भिरको फेदबाट आगो बाल्न थाल्छन् जसले गर्दा धुँवा को मुस्लो माथि मौरी को घार सम्म पुग्छ अरू केही सिकारी भिरको माथि पट्टि डोरी र सिडी कस्न थाल्छन । त्यसपछि एक जना सिकारी माथिबाट त्यो डोरी र सिडी प्रयोग गरेर मौरीको घार भएको ठाउँ पुग्छ र मह काढ्न थाल्छ । त्यो बेला, यो काम गर्न लगभग १६ जना सिकारी र पुरै १० घण्टा समय लागेको थियो ।
यस भ्रमणमा सिकारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न भोज डील्स कम्पनीले खानेकुराको प्याकेजहरू पठाइदिएको थियो हामीले ती प्याकेजहरू उनीहरूलाई हस्तान्तरण गर्यौ । उनीहरू निकै उत्साहित देखिन्थे। भोज डील्स काठमाडौँमा यस्तै प्याकेजहरू घरघरमा पुर्याउने एउटा कम्पनी हो । यो निकै महत्त्वपूर्ण प्रचलन हामीले तल रहेको डकुमेन्ट्री र केही तस्बिरहरूमा प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ ।
काठमाण्डौका भिआईपी ज्योतिसहरुको राम काहानी (भिडियाे)
डा. आलोकले यसरी निकालेका थिए दिमागमा छिरेको फलामको टुक्रा (भिडियाे)
समीक्षा अधिकारीको ‘वनमा काफल ‘ सार्वजानिक
मंगोलियन हार्टका राजु लामाको ”कुरा काट्ने”मा सदिप र दिप्ती
मेनुकासँगको वाचा पूरा गरे रामकृष्ण ढकालले, के गरेका थिए वाचा ? (भिडियो)
गायक उजन नेम्वाङको गीतमा सुष्मा कार्की र सोनिका रोकाया (भिडियो)